Samsung Galaxy J5 (2017) dia mahazo fanavaozana fiarovana amin'ny BlueBorne | Androidsis
Aaron Rivas | | Samsung, fiarovana
Mandritra ny fotoana kelikely, Android dia voakasiky ny malware isan-karazany izay mivoaka mba handrehitra ny traikefanay momba ny mpampiasa, afaka manome fidirana sy fifehezana tsy misy alalana amin'ireo hackers sy olona mpanao ratsy ... Amin'ity tranga ity dia hiresaka momba ny BlueBorne, iray amin'ireo malware farany vao haingana izay, tsy manafika Android fotsiny, fa koa ho an'ny IOS, Linux, Windows ary fitaovana marani-tsaina toa ny Smarts TV.
Ny Samsung Galaxy J5 dia marefo satria tsy manana, na nanana, patch fiarovana manohitra an'ity malware ity ... Niova izany noho ny fanavaozana vaovao navoaka ho an'ity terminal ity.
1 Ny fanavaozana an'i BlueBorne ho an'ny Samsung Galaxy J5 (2017) dia azo alaina izao
2 BlueBorne: fandrahonana tsy tapaka
2.1 Fa maninona no mitranga izany?
3 BlueBorne dia tsy misy fiantraikany amin'ny Smartphone Android fotsiny
Ny fanavaozana an'i BlueBorne ho an'ny Samsung Galaxy J5 (2017) dia azo alaina izao
Raha mbola tsy nanavao ny anao ianao Samsung Galaxy J5 (2017), mamporisika anao izahay hanao izany faran'izay haingana.
Ny fanavaozana dia milanja 391,88 mb ary, hijerena amin'ny tanana raha efa ananantsika izany, mankanesa any 'Fikirana' ary ao 'Fanavaozana amin'ny tanana', tsy maintsy misy ny fanavaozana izay hiaro antsika amin'ny BlueBorne.
Raha mbola tsy hainao inona ny BlueBorne ary ahoana ny fiantraikan'ity malware ity eo aminao?, tonga tany amin'ilay tranonkala voalaza ianao. Koa satria Androidsis, te hampianatra anao momba ny zavatra ratsy aterak'ity virus mampidi-doza ity izahay, koa mamakia hatrany ...
BlueBorne: fandrahonana tsy tapaka
Teo aloha, eto amin'ny Androidsis, horesahintsika BlueBorne y ahoana no ahafantarana raha marefo ny findainao.
Malware BlueBorne dia hitan'i Armis Labs, orinasa fiarovana solosaina mifantoka amin'ny IoT (Internet of Things).
Avy eo, hasehonay anao ny horonantsary iray izay, Armis Labs dia mampiseho amintsika ny fomba fanaparitahany sy ny fanazavany ny loza aterak'ity malware ity.
Ao amin'ny horonantsary, na dia amin'ny teny anglisy aza, dia hitantsika izany mora indrindra ny fampielezana ny BlueBorne. Mila manana activated Bluetooth fotsiny ianao Ary, tsotra sy tsotra, handray malware isika nefa tsy tsapantsika akory.
Fa maninona no mitranga izany?
Izany dia vokatry ny a olana ara-piarovana amin'ny Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP), izay mamela ny fitaovana hizara amin'ny Internet.
Este fanitsakitsahana fiarovana hamela malware BlueBorne, manatanteraka kaody hifehezana lavitra ny terminal.
BlueBorne dia tsy misy fiantraikany amin'ny Smartphone Android fotsiny
Amin'ity horonantsary ity, Armis Labs mampiseho amintsika izany, ao amin'ny fizarana ambony amin'ny efijery video, izay ren'ny mpijirika; eo amin'ny fizarana ankavanan'ny farany ambany amin'ny efijery, izay hitan'ny mpijirika, ary, ao amin'ny fizarana havanana ambany, izay ataontsika amin'ny famantaranandron-tsika.
Ho an'ity horonantsary ity, ny fitaovana ampiasaina dia ny Samsung Gear S3.
Araky ny efa nolazaina teo aloha. BlueBorne dia tsy misy fiantraikany amin'ny Smartphone Android fotsiny, na amin'ny orinasa hafa toa an'i Apple, Microsoft, Linux ary ny hafa, fa saika ny fitaovana marani-tsaina rehetra, ao anatin'izany, araka ny hitantsika, ny Samsung Gear S3.
Raha voan'ny BlueBorne ny fitaovanao, na inona na inona ataonao, dia ho hitan'ny mpijirika izany.
Fantatrao izao ... Raha manana Smartphone ianao Samsung Galaxy J5 (2017) ary mbola tsy nahazo ny fanavaozana ho azy ianao, azafady mba ataovy haingana araka izay tratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ny Samsung Galaxy J5 (2017) dia mahazo fanavaozana fiarovana amin'ny BlueBorne
Samsung dia namorona milina hitrandrahana Bitcoins miaraka amin'ny Galaxy S5 taloha
Fampiroboroboana lehibe amin'ny Halloween, hatramin'ny 70% amin'ny Lightinthebox